Denmark: Qoys soomaali ah oo dib loogu soo celiyay sharcigooda magangalyada, ogow sababta - NorSom News
Denmark: Qoys soomaali ah oo dib loogu soo celiyay sharcigooda magangalyada, ogow sababta
Qoys soomaali ah oo ka kooban gabar yar iyo hooyadeed, ayaa loo ogolaaday inay Denmark soo joogaan, kadib markii dowlada dalkaas ay mar hore ku amartay inay Denmark isaga baxaan.
Go´aanka qoyskan loogu ogolaaday inay dalkaas sii degenaadaan, ayaa waxaa gaaray hey´ada looga dacwooda go´aanada dowlada ee ku aadan arimaha qoxootiga. Goáankaas ayay hey´adu ku micneysay in gabadha yar ee qoyskaas soomaaliyeed ay khatar ugu jirto in la gudo, hadii dib loogu celiyo Soomaaliya. Iyada oo la sheegay in 95-98% dumarka soomaaliyeed ee Soomaaliya kunool, ay la kulmaan gudniin.
Qoyskan ayaa kamid ah guud ahaan 800 qof oo soomaali ah, kuwaas oo dowlada Denmark ay sheegtay inay dib u qiimeyn ku sameyn doonto sharcigooda magangalyada.
Previous articleGermany: Warbaahinta Dresden oo hadalheyso soomaali lagu qabtay fal xatooyo ah
Next article(Cunsuriyad):Hooyo soomaali ah oo mindi lagu weerararay bartamaha magaalada Oslo